အော်တာပဲကြားပြီး ဂဏန်းကိုက်ခံရတာကိုမသိကြပဲ.. မာနကြီးတဲ့ မိန်းမတဲ့လား????? - Apannpyay
Home > Uncategorized > ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ > အော်တာပဲကြားပြီး ဂဏန်းကိုက်ခံရတာကိုမသိကြပဲ.. မာနကြီးတဲ့ မိန်းမတဲ့လား?????
အော်တာပဲကြားပြီး ဂဏန်းကိုက်ခံရတာကိုမသိကြပဲ.. မာနကြီးတဲ့ မိန်းမတဲ့လား?????
January 12, 2018 Apann Pyay
လောကကြီးထဲမှာ မိန်းမတစ်ယောက် ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာရပ်တည်နိုင်ဖို့ပေးဆပ်ရတာများပါတယ် ။ဒီလိုအခက်ခဲတွေကို ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ခရီးလမ်းမှာ မာနဆိုတာ မဖြစ်မနေမို့ ထားခဲ့ရပါတယ် ။
ကိုယ့်ဘဝမှာ လိုချင်တာကို စိတ်ကူးနဲ့ တင်ကျေနပ်တာမျိုးမလုပ်ခဲ့ဖူးဘူး အရိုးသားဆုံးနည်းနဲ့မရရအောင်ယူခဲ့တယ် ။
သူများအောင်မြင်မှုကိုဘေးကနေကြည့်ပြီးအားကျနေတဲ့အဆင့်နဲ့ မတင်းတိမ်ဘူး ကိုယ်ပါ အောင်မြင်တဲ့နေရာရောက်အောင် ကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်းရှိသလောက် ကြိုးစားရယူချင်တယ် ။
ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒကို ထိုင်ပြီးမတွေဝေခဲ့ဖူးဘူး ချက်ချင်းထလုပ်ခဲ့တယ် ။အမှားဖြစ်သွားရင်တောင် ကိုယ့်အပြစ်နဲ့ ကိုယ်ဆိုပြီးကျေနပ်ခဲ့တယ် ။ကိုယ်မှန်တယ်ထင်တဲ့ နေရာမှာဆို ဘယ်သူ့ မျက်နှာမှမထောက်ဘူး ခုရှုပ်မှနောင်ရှင်း ပြောစရာရှိရင် ပြောပစ်လိုက်တယ် ။
လိုချင်တာကိုရအောင်ယူခဲ့တယ် ။ လုပ်ချင်တာကို မတွေဝေဘဲထလုပ်ခဲ့တယ် ။ပြောစရာရှိရင် အားမနာတတ်ဘူးပြောခဲ့တယ် ။ ဖြစ်ချင်တာကို အခက်ခဲများစွာကျော်လွှာပြီးဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တယ် ။
ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့ နေရာ ၊ ဘဝ ဆိုတာ သူများတကာထက်အခက်ခဲများစွာကို ကျော်လွှားပေးဆပ်ပြီးမှ ရရှိခဲ့ရတာတွေပါ ။ ဒါပေမဲ့ သန့် ရှင်းစွာ ရယူပိုင်ဆိုင်ခြင်းအတွက် ကျေနပ် ခဲ့တယ် ။ ဘဝမှာ ကျရှုံးမှာထက် မအောင်မြင်မှာကို အကြောက်ဆုံးဘဲ ။
ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ပြီးသား အောင်မြင်မှုကို ပြန်မကျရှုံးအောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ပေမဲ့ ကိုယ့်လက်ထဲ မရှိသေးတဲ့ အောင်မြင်မှုကိုကျ ပေးဆပ်သလောက်ပြန်မရမှာသိပ်ကြောက်တယ် ။
ကိုယ်လိုချင်တဲ့နေရာ ၊ အတိုင်းတာ တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ရင်တောင် ဘယ်တော့မှ အလွယ်တစ်ကူ ရယူပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိခဲ့ဖူးပါဘူး ။ ဇွဲ ၊ လုံးလ ၊ ဝရိယ ဆိုတာတွေဟာ ကိုယ့်ဘဝအတွက် အကောင်းဆုံး အဖော်မွန်တွေပါ ။
သူတို့ တွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်အစဉ်မှာ လွမ်းမိုးထားခဲ့တဲ့ စေတသိတ်တွေဆို ပိုမှန်ကန်ပါလိမ့်မယ် ။ စိတ်ဓါတ်ကို အမြဲတမ်းမာကြောအာင်ထားတယ် ။
အမှားတွေ ကြုံလာတယ် အခက်ခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်လာ ရတယ် ဘယ်တော့မှ မျက်ရည်မကျဖူးဘူး အားမငယ်ခဲ့ဖူးဘူး ။ စိတ်ကို အမြဲတမ်းမာမာ ဘဲထားခဲ့တယ် ။
တစ်ခုလိုချင်တစ်ခု ပေးဆပ်ရတာ လောကနိယာမ တစ်ခုပဲမို့ဘယ်သောအခါမှ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြစိတ်မရှိ ခဲ့သလို အားငယ် စိတ်ကိုလည်းအဝင်မခံခဲ့ဖူးဘူး ။
ကိုယ့်ခံယူချက်က စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းဟာ နှစ်ခါသေရတယ် လို့ခံယူထားခဲ့တယ် ။ စိတ်ဓါတ်ကို အမြဲဖြူစင်အောင်ထားတယ်။ ပြတ်ပြတ်သားသား ဆက်ဆံတယ် ။ ဆန်ပေးမှ ဆီရ သမီးပေးမှ သမက်ရ ” ဆိုတဲ့လူတွေက
ခပ်များများ မို့အားနာစိတ်ကို နေရာတကာ မထားခဲ့ဘူး ။ ကူညီနိုင်ရင် စိတ်ကိုပြတ်သားစွာ ကူညီပေးလိုက်တယ်။ မကူညီနိုင်ရင်လည်း အားမနာဘူး မဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောပြ ပြီး တောင်းပန်လိုက်တယ် ။
“အားနာရင် ခါးပါတတ်တာ ” သဘာဝမို့ဘယ်သူကိုမှ အားနာ စိတ်မထားဘူး ပြောစရာရှိရင်ပြောလိုက်တယ် ။ ပေးစရာရှိရင် ပေးလိုက်တယ် ။
နောက်ကွယ်ကတော့ ညစ်ပတ်တဲ့စိတ်မထားခဲ့ဘူး ပေါ်တင်ကျကျဘဲ ဖြေရှင်လိုက်တယ် ။ မလိုစိတ်ထား ဘယ်တော့မှ မထားဖူးခဲ့လို့ အမြဲတမ်း ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်သန့် တယ် ။
စိတ်ယုတ်မာမမွေးခဲ့ဖူးလို့ နောက်ကျောလုံတယ် ။ ပြတ်သားတဲ့ဆက်ဆံရေးကြောင့်မိတ်ဆွေစစ်တွေရခဲ့တယ် ။ ပြောစရာရှိရင်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလိုက်တယ် ။ ကူညီနိုင်တာပြတ်သားစွာကူညီပေးခဲ့တယ်။
မနာလိုစိတ်နည်းရင်း လူချစ်လူခင်လည်းပေါများပါတယ် ။ က်ိုယ့်ကိုယ် မလိုတဲ့သူတွေကို ကိုယ်လည်းမလိုအပ်ဘူး။
ကိုယ့်အပေါ် တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေကိုလည်း လှည့်တောင်မကြည့်ခဲ့ဘူး ။ ကိုယ့်မကောင်းကြောင်းပြောတဲ့သူတွေကိုတုဖက်ပြီး စကားမပြောချင်ဘူး ။
ကိုယ့်အပေါ်အလကားနေရင်း မုန်းတီးနေသူတွေအပေါ်ဟန်ဆောင်ပြီး ကိုယ့်ဖက်ကသဘောထား မကြီးပေးနိုင်ဘူး အဝေးကရှောင်နေလိုက်တယ်။
အောင့်နိုင်ရင်အောင်တယ် ရှောင်နိုင်ရင်ဘေးကင်းတယ်လို့တောင် ဆိုစမှတ်ရှိသေးတာပဲ ။ ကိုယ့်ကိုလိုလားသူတွေအတွက် မေတ္တာပေးမယ် ။
သိမှတ်တာလေးတွေ ဝေမျှမယ် ။ တတ်နိုင်သလောက်ကူညီပေးမယ် ။ ဒီလောက်ဆိုကိုယ့်ဘဝ ပြည့်စုံပြီ ရွှေငွေစည်းစိမ် မလိုတော့ဘူး ။
လူဖြစ်နေတုန်း စိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးပြီ ။ ရွှေငွေစည်းစိမ်ဆိုတာ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ အရသာခံရတာ။ သေရွာမပါဘူး သမိုင်းလှဖို့ ဘဲ အရေးကြီးတယ် ။ လူတွေအမြင်မှာတော့ ကိုယ်ဟာ မာနကြီးတဲ့မိန်းမတဲ့ ။
တခါတခါကျတော့လည်း မိန်းမသားတစ်ယောက်ရဲ့ရိုးသားစွာရပ်တည်ရှင်သန်မှုအတွက် ကြိုးစားနေတာကိုတိုက်ခိုက်ခံရချိန် အလဲလဲအပြိုပြို ယိမ်းယိုင်ခဲ့ရတယ် ။
မိအေးအော်တာပဲသိပြီး ဂဏာန်းကိုက်တာမသိတဲ့လောကကြီးကိုမုန်းတီးမိတယ် ။ လောကကြီးမှာ မဖြစ်နိုင်တာ ဘာမှမရှိဘူးမဖြစ်သေးတာဘဲရှိတာပါ ဆိုတဲ့ မာနစိတ်လေးနဲ့ပြန်ရှုန်းထခဲ့ရပါတယ် ။
ယောက်ျားသားတွေလို စိတ်ရှိတိုင်းလုပ်ခွင့် မရှိတဲ့ မိန်းမသားမို့မာနလေးတော့ ထားပါရစေ ။
မူရင်း ပို့စ်ပိုင်ရှင်အား လေးစားစွာဖြင့်
အျောတာပဲကွားပွီး ဂဏနျးကိုကျခံရတာကိုမသိကွပဲ.. မာနကွီးတဲ့ မိနျးမတဲ့လား?????
လောကကွီးထဲမှာ မိနျးမတဈယောကျ ဂုဏျသိက်ခာရှိစှာရပျတညျနိုငျဖို့ပေးဆပျရတာမြားပါတယျ ။ဒီလိုအခကျခဲတှကေို ရငျဆိုငျနရေတဲ့ ခရီးလမျးမှာ မာနဆိုတာ မဖွဈမနမေို့ ထားခဲ့ရပါတယျ ။
ကိုယျ့ဘဝမှာ လိုခငျြတာကို စိတျကူးနဲ့ တငျကနြေပျတာမြိုးမလုပျခဲ့ဖူးဘူး အရိုးသားဆုံးနညျးနဲ့မရရအောငျယူခဲ့တယျ ။
သူမြားအောငျမွငျမှုကိုဘေးကနကွေညျ့ပွီးအားကနြတေဲ့အဆငျ့နဲ့ မတငျးတိမျဘူး ကိုယျပါ အောငျမွငျတဲ့နရောရောကျအောငျ ကိုယျစှမျးဉာဏျစှမျးရှိသလောကျ ကွိုးစားရယူခငျြတယျ ။
ဖွဈခငျြတဲ့ ဆန်ဒကို ထိုငျပွီးမတှဝေခေဲ့ဖူးဘူး ခကျြခငျြးထလုပျခဲ့တယျ ။အမှားဖွဈသှားရငျတောငျ ကိုယျ့အပွဈနဲ့ ကိုယျဆိုပွီးကနြေပျခဲ့တယျ ။ကိုယျမှနျတယျထငျတဲ့ နရောမှာဆို ဘယျသူ့ မကျြနှာမှမထောကျဘူး ခုရှုပျမှနောငျရှငျး ပွောစရာရှိရငျ ပွောပဈလိုကျတယျ ။
လိုခငျြတာကိုရအောငျယူခဲ့တယျ ။ လုပျခငျြတာကို မတှဝေဘေဲထလုပျခဲ့တယျ ။ပွောစရာရှိရငျ အားမနာတတျဘူးပွောခဲ့တယျ ။ ဖွဈခငျြတာကို အခကျခဲမြားစှာကြျောလှာပွီးဖွဈအောငျလုပျခဲ့တယျ ။
ကိုယျပိုငျဆိုငျခငျြတဲ့ နရော ၊ ဘဝ ဆိုတာ သူမြားတကာထကျအခကျခဲမြားစှာကို ကြျောလှားပေးဆပျပွီးမှ ရရှိခဲ့ရတာတှပေါ ။ ဒါပမေဲ့ သနျ့ ရှငျးစှာ ရယူပိုငျဆိုငျခွငျးအတှကျ ကနြေပျ ခဲ့တယျ ။ ဘဝမှာ ကရြှုံးမှာထကျ မအောငျမွငျမှာကို အကွောကျဆုံးဘဲ ။
ကိုယျပိုငျဆိုငျပွီးသား အောငျမွငျမှုကို ပွနျမကရြှုံးအောငျ ထိနျးသိမျးနိုငျပမေဲ့ ကိုယျ့လကျထဲ မရှိသေးတဲ့ အောငျမွငျမှုကိုကြ ပေးဆပျသလောကျပွနျမရမှာသိပျကွောကျတယျ ။
ကိုယျလိုခငျြတဲ့နရော ၊ အတိုငျးတာ တဈခုကို ပိုငျဆိုငျလာခဲ့ရငျတောငျ ဘယျတော့မှ အလှယျတဈကူ ရယူပိုငျဆိုငျခှငျ့မရှိခဲ့ဖူးပါဘူး ။ ဇှဲ ၊ လုံးလ ၊ ဝရိယ ဆိုတာတှဟော ကိုယျ့ဘဝအတှကျ အကောငျးဆုံး အဖျောမှနျတှပေါ ။
သူတို့ တှဟော ကိုယျ့ရဲ့ စိတျအစဉျမှာ လှမျးမိုးထားခဲ့တဲ့ စတေသိတျတှဆေို ပိုမှနျကနျပါလိမျ့မယျ ။ စိတျဓါတျကို အမွဲတမျးမာကွောအာငျထားတယျ ။
အမှားတှေ ကွုံလာတယျ အခကျခဲတှနေဲ့ ရငျဆိုငျလာ ရတယျ ဘယျတော့မှ မကျြရညျမကဖြူးဘူး အားမငယျခဲ့ဖူးဘူး ။ စိတျကို အမွဲတမျးမာမာ ဘဲထားခဲ့တယျ ။
တဈခုလိုခငျြတဈခု ပေးဆပျရတာ လောကနိယာမ တဈခုပဲမို့ဘယျသောအခါမှ စိုးရိမျကွောငျ့ကွစိတျမရှိ ခဲ့သလို အားငယျ စိတျကိုလညျးအဝငျမခံခဲ့ဖူးဘူး ။
ကိုယျ့ခံယူခကျြက စိတျဓါတျကခြွငျးဟာ နှဈခါသရေတယျ လို့ခံယူထားခဲ့တယျ ။ စိတျဓါတျကို အမွဲဖွူစငျအောငျထားတယျ။ ပွတျပွတျသားသား ဆကျဆံတယျ ။ ဆနျပေးမှ ဆီရ သမီးပေးမှ သမကျရ ” ဆိုတဲ့လူတှကေ
ခပျမြားမြား မို့အားနာစိတျကို နရောတကာ မထားခဲ့ဘူး ။ ကူညီနိုငျရငျ စိတျကိုပွတျသားစှာ ကူညီပေးလိုကျတယျ။ မကူညီနိုငျရငျလညျး အားမနာဘူး မဖွဈနိုငျကွောငျးပွောပွ ပွီး တောငျးပနျလိုကျတယျ ။
“အားနာရငျ ခါးပါတတျတာ ” သဘာဝမို့ဘယျသူကိုမှ အားနာ စိတျမထားဘူး ပွောစရာရှိရငျပွောလိုကျတယျ ။ ပေးစရာရှိရငျ ပေးလိုကျတယျ ။
နောကျကှယျကတော့ ညဈပတျတဲ့စိတျမထားခဲ့ဘူး ပျေါတငျကကြဘြဲ ဖွရှေငျလိုကျတယျ ။ မလိုစိတျထား ဘယျတော့မှ မထားဖူးခဲ့လို့ အမွဲတမျး ကိုယျ့လိပျပွာကိုယျသနျ့ တယျ ။
စိတျယုတျမာမမှေးခဲ့ဖူးလို့ နောကျကြောလုံတယျ ။ ပွတျသားတဲ့ဆကျဆံရေးကွောငျ့မိတျဆှစေဈတှရေခဲ့တယျ ။ ပွောစရာရှိရငျပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောလိုကျတယျ ။ ကူညီနိုငျတာပွတျသားစှာကူညီပေးခဲ့တယျ။
မနာလိုစိတျနညျးရငျး လူခဈြလူခငျလညျးပေါမြားပါတယျ ။ ကျိုယျ့ကိုယျ မလိုတဲ့သူတှကေို ကိုယျလညျးမလိုအပျဘူး။
ကိုယျ့အပျေါ တိုကျခိုကျတဲ့သူတှကေိုလညျး လှညျ့တောငျမကွညျ့ခဲ့ဘူး ။ ကိုယျ့မကောငျးကွောငျးပွောတဲ့သူတှကေိုတုဖကျပွီး စကားမပွောခငျြဘူး ။
ကိုယျ့အပျေါအလကားနရေငျး မုနျးတီးနသေူတှအေပျေါဟနျဆောငျပွီး ကိုယျ့ဖကျကသဘောထား မကွီးပေးနိုငျဘူး အဝေးကရှောငျနလေိုကျတယျ။
အောငျ့နိုငျရငျအောငျတယျ ရှောငျနိုငျရငျဘေးကငျးတယျလို့တောငျ ဆိုစမှတျရှိသေးတာပဲ ။ ကိုယျ့ကိုလိုလားသူတှအေတှကျ မတ်ေတာပေးမယျ ။
သိမှတျတာလေးတှေ ဝမြှေမယျ ။ တတျနိုငျသလောကျကူညီပေးမယျ ။ ဒီလောကျဆိုကိုယျ့ဘဝ ပွညျ့စုံပွီ ရှငှေစေညျးစိမျ မလိုတော့ဘူး ။
လူဖွဈနတေုနျး စိတျခမျြးသာရငျပွီးပွီ ။ ရှငှေစေညျးစိမျဆိုတာ ကိုယျတဈယောကျထဲ အရသာခံရတာ။ သရှောမပါဘူး သမိုငျးလှဖို့ ဘဲ အရေးကွီးတယျ ။ လူတှအေမွငျမှာတော့ ကိုယျဟာ မာနကွီးတဲ့မိနျးမတဲ့ ။
တခါတခါကတြော့လညျး မိနျးမသားတဈယောကျရဲ့ရိုးသားစှာရပျတညျရှငျသနျမှုအတှကျ ကွိုးစားနတောကိုတိုကျခိုကျခံရခြိနျ အလဲလဲအပွိုပွို ယိမျးယိုငျခဲ့ရတယျ ။
မိအေးအျောတာပဲသိပွီး ဂဏာနျးကိုကျတာမသိတဲ့လောကကွီးကိုမုနျးတီးမိတယျ ။ လောကကွီးမှာ မဖွဈနိုငျတာ ဘာမှမရှိဘူးမဖွဈသေးတာဘဲရှိတာပါ ဆိုတဲ့ မာနစိတျလေးနဲ့ပွနျရှုနျးထခဲ့ရပါတယျ ။
ယောကျြားသားတှလေို စိတျရှိတိုငျးလုပျခှငျ့ မရှိတဲ့ မိနျးမသားမို့မာနလေးတော့ ထားပါရစေ ။
မူရငျး ပို့ဈပိုငျရှငျအား လေးစားစှာဖွငျ့
ဆေးကုပေးမယ်ဆိုပြီး အခန်းထဲခေါ် မုဒိန်းကျင့်တဲ့ ဂိုဏ်ဆရာကို အမျိုးသမီးက ငယ်ပါကိုဖြတ်
စစ်အာဏာသိမ်းခြင်းကို လက်မခံပဲ ရာထူးမှနှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့ ဗမာ့တပ်မတော်ရဲ့ မြောက်ပိုင်းတိုင်းမှူး